Qabiyyee - Project dldl/ድልድል
Qo’annoon kun fi hojiin misooma Itiyoophiyaa keessatti fi Ertiriyaa keessatti kan dalagamuu yoo ta’uu dalagaa guddaan keessatu aadaa-amantaa xiyyeeffannaa adda rakkoo barbaadan qo’annoo fi misooma rakkoowwan akka hiikamaan gochuudha.
DilDil jechuun riqichaa jechuu yoo ta’uu qo’annoo adda addaa fi qaamota garagaraa bakka tokkotti walitti fiduun hawaasa amanaa ta’een kan dalagamuu miidhaa biyyaa, rakkoo biyyaa kan ta’aan furuuf bu’aa qo’annoowwaniin rakkoo furuudha.
Weebsayitii bu’aa qabeessa fi beekumsaan kan foyyaa’ee
Kayyoon weebsayitii kanaa qo’annoo kallattii adda addaa jiran beekumsa fi ogeessotan bakka tokkotti fiduun walitti dhufeenya gaarii uumuudha.
Weebsayiitiin kun harkaa caala bu’aa qo’annoo kan ibsuu yoo ta’uu dabalataniis hirmaana qo’annoo, beekumsa waljijjiiraa fi qophiiwwan ni kennu. Keessatu seera luboota fi barumsaa Tiyoloojii, dhimma amantaa ta’an, miidhaa adaa qabessaa ittisuu irratti qo’annawwanii fi qophii foyya’ee argamaan haa ta’uutti kitaabotaa fi qo’annoon kun piroojektii biyyatti rawwaatan ogeessoota qofaa banaa ta’aa.
Akkasumas miidhaa addunyaa guutuu dhorkuuf/ hambisuuf kan dandeessisuu dandiiwwan qo’annoo beekumsa kenna Piroojektiin kun Ammariffan, Tigriffaan fi Ingiliffan kan maxxanfamuu yoo ta’uu, akkumaa haalattin afaan hawaasan qopha’uu danda’a.
Dabalataan dubbbisuu furtuu gad qabaa
Project dldl/ድልድል Annual Conference 2022 Call for Submissions
(Deadline: 30 June )
15/04/2022 GMT+1 (BST)
Project dldl/ድልድል Podcast Series Episode 4: The role of religious t...
08/04/2022 GMT+1 (BST)
Project dldl/ድልድል Podcast Series Episode 3: Domestic violence in Et...
Project dldl/ድልድል completes week-long ‘refresher’ train...
Piroojektiin kun qo’annoo United Kingdom fi Innoveshiniin kan deegramuu yoo ta’uu gara fulduraatti duraa ta’aan leenjii fi deegarsaa ‘Dildil’ qo’annoo amantaa, saala, misooma fi fayyaa hawaasa dararaa adaa qabessa dhorkuuf keessattu Itiyoophiyaa, Ertiriyaa fi United Kingdom qo’annoo harra piroojektii kan jedhuun kan dhabbateedha. /Grant Retine / T043350/1/, akkasumas Harry Frank Guggenheim faawundeeshinii (deeggarsa qo’annoo 2019) kan godhamuufi.
Qo’annoon polisii UKRI mijawaa ta’uun beekumsa warra gita bitootta yaada isaanii bilisaa baasuun kan dalagamuu yoo ta’uu, kallattii kanaan warra jiran bu’aa qo’annoowwanii poolisii warra fayyadamaniif kan eeyyamu ta’a. Bu’aawwan maxxansa V-F-P- Creative Commons Attribution Non commercial /CCBY-Nc-4.0/ . addunyaa guutuu eeyyama hawaasa kan bahuu dha. Eyyamnii kun bu’aa maxxansa waliin makamee beekumsa mataa isaa dabalatee daldalaaf hin oolu jechuun eyyamaa jalatti hiruun/kenuun / kan danda’uu hojii dhuunfaa argachuuf hin oolu.
Bu’aa qo’annoo keessanii maqaa guutuu, waggaa fi iddoo itti maxxafamee ibsamuun irra jiraa. Kun kan ta’uu piroojektiin Dildil, qo’annoo amantaa , saala, misooma fi fayya hawaasa midhaa biyya keessatti uumaanii hawaasa amanta hordofu irra dhorkuuf UK qo’annoof kan hojjatan gara fuulduraatti ni dhufaa. Fuula kana irratti ergawwan bahan ykn dadaarban dhabbile UKRI fi HFG bakka bu’aan mitti.